तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको विकासनिर्माणमा अनुकूल आधार तयार भएको छः मुख्यमन्त्री पोखरेल | Investopaper
इन्भेष्टाेपेपर । फागुन ०३ २०७७
लुम्बिनी — मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नयाँ राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत बनेका प्रदेश र यसका संरचना विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन् । प्रदेशका संरचना स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने काम गरेको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले जनतालाई विकाससँग जोड्ने गरी विकासका सानाठूला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थापना दिवसको मूल समारोह आयोजना गर्दैछ । यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का लागि भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश :
राससः मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि बनेका प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस तीन वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका रह्यो ?
राससः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामी सफल छाँै भन्ने हो भने तथ्यमा हामी सात प्रदेशमा कुन स्थानमा छौँ, सफलताका सूचक के के हुन् सक्लान् ?
मुख्यमन्त्री : लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्दा हामी लगभग सम्पन्नताको अवस्थामा पुगेका छौँ, अरु धेरै ठाउँ मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणकै प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सन्दर्भमा कुरा गर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । अब बाँध निर्माण सकेर सुरुङबाट पानी झार्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका तटबन्ध निर्माणका काम करीब सकिएको छ । यसले बर्दियाको बाढीको पीडा अबका दिनमा पहिलेका रुपमा बेहोर्नु पर्दैन । सिँचाइको क्षेत्र विस्तार भएको छ । अर्को, सिक्टामा चाहिँ मुख्य जटिल समस्या थियो, त्यो समस्यालाई हामीले प्रदेशकातर्फबाट पनि विशेष पहल गरेर समस्या हल गरेका छौँ, अहिले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी छाड्ने काम भइरहेको छ ।
तिलौराकोटमै एउटा नयाँ सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने हिसाबले मास्टर प्लान तयारीको काम अगाडि बढेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनीकै विकासका सन्दर्भमा पहिलेका तुलनमा धेरै नयाँ कुरा अगाडि बढ्न थालेका छन् । अर्कातिर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र प्रसूति अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । अब स्थानीय समुदायसँग लुम्बिनीलाई जोड्न सकिएन भन्ने गुनासो अन्त्य हुँदैछ । प्रदेश सरकारकै अग्रसरमा चक्रपथको काम पनि यस वर्ष पूरा हँुदैछ भने भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय आयोजनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस प्रदेशमा हुलाकी सडकको तेस्रो चरणको आयोजना शुरु भएको छ । यो पनि हाम्रा लागि उपलब्धिपूर्ण पक्ष हो । कोभिड जोखिमका कारणले रोकिएको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको काम पनि पछिल्लो समयमा तीव्रता लिएको छ । कोभिडको समयलाई अलग गरिदिने हो भने हामीले त्यस क्षेत्रमा पनि प्रगति गरिराखेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा चालू आयोजनाका सन्दर्भमा उपलब्धिमूलक सुधार भएको देखिन्छ ।
राससः यस तीन वर्षका अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र कति किलोमिटर बाटो निर्माण भए होला ?
राससः लुम्बिनी प्रदेशलाई विकासका दृष्टिकोणले अन्य प्रदेशभन्दा के कारणले फरक मान्न सकिन्छ ?
रासस : लुम्बिनी प्रदेशमा अब कति कानून आवश्यक छ, कानून कार्यान्वयनको पाटो अलि कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ नि ?
मुख्यमन्त्रीः अहिले मूल कानूनका हिसाबले भन्दा पाँच दर्जन जति मूल कानून निर्माण भएका छन्, त्यसका सहायक कानूनहरु पनि थुप्रै बनेका छन् । सबै विषय एकचोटि कार्यान्वयनमा जाँदैन, आवश्यक पर्दा प्रयोग हुने हो । कानून बनाउनुपर्छ, आवश्यक परेका बेला कानून प्रयोग हुन्छ तर सामान्यतया सरकारी खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानून नभइकन काम चल्दैन । त्यसैले सरकारी खर्चका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक कानून हामीले बनाइसकेका छौँ । यससँगै कार्यविधिका रुपमा होस् वा ऐनका रुपमा होस्, नियमावलीका रुपमा होस्, केही चिज यस्ता छन् जसका लागि केन्द्रलाई पर्खिनुपर्ने स्थिति बनेको छ । यद्यपि त्यसको मस्यौदाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ ।
राससः लुम्बिनी प्रदेशको महत्वाकाङ्क्षी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट कति जति मान्छे लाभान्वित भएका होलान्, के प्रभाव परेको होला ?
मुख्यमन्त्रीः हाम्रो सरकारी खर्च व्यवस्थापन प्रक्रियाका जटिलताले मान्छेलाई तत्काल राहत दिन नसकेका विषयमा यसले सम्बोधन गरेको छ । अलिकति कार्यविधि लक्षित समुदायमा जाने प्रकारको बनाएका छाँै, जसरी सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायमा नपुगेर टाठाबाठाले पाए भन्ने आरोप आउँछ, त्यसको कार्यविधि सोझै लक्षित समुदायमा पुग्ने हिसाबले बनेका छन् । त्यसका असर धेरै सकारात्मक छन् ।
मुख्यमन्त्री : पहिलो कुरा शुरुको चरणमा रुपन्देहीको कञ्चन र दाङको बबई गाउँपालिकालाई नमूनाका रुपमा अगाडि बढाउने हिसाबले काम गरिरहेका छाँै, प्रदेशका दुई वटा पालिकालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेका थियौँ, यी दुई पालिकाको नापनक्शाको तहमा पुगिसकेको छ । तिनीहरु एक प्रकारले नक्शाङ्कन तहमा प्रवेश गरेका छन् ।
राससः अहिले यदाकता सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने काम भएको छ । यसलाई कुनरुपमा लिन सकिन्छ ?
मुख्यमन्त्री : सङ्घीयतामाथिको प्रश्न संविधान निर्माणकै बेलादेखि थियो । त्यतिबेला पनि सङ्घीयता पक्ष र विपक्ष नभएको होइन र अहिले पनि त्यो विचारमाथि बहस चलिरहेको छ । नयाँ प्रणालीतर्फ जान चाहिँ नेपालको संविधानमा दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यस प्रकारको कुरा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ । कसैले प्रकट गर्ने विचारले मात्र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हँुदैन । व्यक्तिले प्रकट गरेका विचारले मात्र सङ्घीयता धरापमा छ भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन किनकि हाम्रो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गरिसकेको छ ।
राससः पार्टी विवादले यहाँको सरकारका मन्त्री पक्षविपक्षमा देखिएका छन्, यसले सरकारलाई काम गर्न असहज भएको छैन ?
← नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीकाे राजिनामा स्वीकृत
मिस एण्ड मिस्टर विराटनगर–२०७७ प्रतियोगिता चैतमा →